Apple waxay soo bandhigeysaa iPhone 6 si rasmi ah | War gadget
Apple waxay si rasmi ah u soo bandhigeysaa iPhone 6
Nacho Cuesta | | Mobiles, Noticias
Ayaa bilaabay khudradda tufaaxa Daqiiqado ka hor oo aan ku jirno waxaan rajeyneynaa inaan ogaanno dhammaan sirta ku hareeraysan iPhone 6 iyo nooca ugu dambeeya ee iOS 8. Si aad u kiciso rabitaankaaga iyo sidii caadiga ahayd, Tim Cook ayaa furay munaasabadda oo naga yaabisay tirooyinka la socda shirkaddiisa , waxaas oo dhan ka dib fiidiyow galitaan kaas oo, mar labaad, ay raadineyso inay ku midoobaan alaabada Apple dareen leh
Tim Cook wuxuu dib uxasuustey 30 sano kahor, Steve Jobs inuu aduunka kusoo kordhiyey kombuyutarkii ugu horeeyey ee loo yaqaan 'Macintosh', badeecad wax ka badashey qaabka aan u aragno xisaabinta heerka guriga, sidaa darteed 30 sano kadib waxay heystaan ​​alaabooyin cusub oo ay na bari doonaan.
Sanadkii la soo dhaafay waxaa la soo bandhigay laba nooc oo iPhone ah, wax dhacay markii ugu horeysay taariikhda Apple waxayna sanadkaan ku celceliyeen qaab cusub oo si sax ah isugu mid ah oo la soo daadiyey inta lagu gudajiray bilooyinkan. Kani waa iPhone 6 sida uu sheegayo Tim Cook, aaladda ugu horumarsan ee abid taariikhda taariikhda Apple.
Maxaa ku cusub iphone 6-kan? Jilaaga koowaad waa shaashaddaada, a jiilka cusub ee muuqaalka 'Retina Display' kaas oo ku dul dejinaya moodal leh sawir dhererkiisu yahay 4,7 inji iyo mid kale oo leh shaashad 5,5 inji ah Marka lagu daro shaashadda kordhay, Muuqaalka 'Retina Display HD' wuxuu bixiyaa midab midabkiisu u dhow yahay sRGB, nidaam iftiin aad u khafiif ah iyo muraayad la xoojiyay.
Moodooyinka cusub ee iPhone 6 waa kuwo dhuuban, gaar ahaan, 6,9 milimitir loogu talagalay qaabka 4,6-inji iyo 7,1-milimitir marka loo eego iPhone Plus, waa magac ay Apple u adeegsatay qaabka iPhone 6 oo leh shaashad 5,5 inji ah.
Xaaladda iPhone 6 Plus, waxaa sidoo kale loo isticmaali karaa qaabka muuqaalka iyo isdhexgalka macruufka ayaa la qabsan doona jihayntan cusub. Waxaa sidoo kale jiri doona hab loo isticmaalo terminaalka hal gacanKaliya waa inaad laba-guji ku taabataa Aqoonsiga Taabashada oo wax walbana waxay ku yaalliin qaybta hoose ee shaashadda si ay u heli karto marka aan dhammaynona, mar labaad guji wax walbana shaashad buuxda ayey mar labaad shaqeyn doonaan.
Marka laga hadlayo qalabka IPhone 6-da, labada terminaalba waxay sii daayaan jiil cusub oo ka tirsan Apple's SoC oo hadda loo yaqaan Apple A8. Chipset-kan wuxuu hayaa qaab-dhismeedkiisa 64-bit laakiin waxaa la soo saaray iyadoo la raacayo hannaanka 20-nanometer, oo bixinaya wadarta 2.000 bilyan oo transistors. Natiijadu waa qalab a 25% ka awood badan marka loo eego iPhone 5s, 50% tamar badan oo hufan iyo, sida xaqiiqda xiisaha leh, 50 jeer ka dhakhso badan iPhonekii ugu horreeyay ee la bilaabay 2007.
Marka la soo koobo, iPhone-kan 6 wuxuu ballan qaadayaa awood laakiin wax walba ka sarreeya waxtarka tamarta sare si ismaamulkooda uusan ugu ciqaabin sidii hore. IPhone 6 wuxuu bixin doonaa 14 saacadood oo ismaamul ah wadahadalada ka hooseeya 3G, 10 maalmood oo heegan ah iyo 11 saacadood oo fiidiyoow ah. Marka laga hadlayo iPhone 6 Plus, cabirkiisa weyn wuxuu ogolaanayaa ismaamul ballaaran, wuxuu gaaraa 14 saacadood oo hadal ah, 16 maalmood oo heegan ah iyo 14 saac oo fiidiyow la ciyaaro.
Sida qaybta sawirada, kamarada gadaal wali way sii jirtaa 8 megapixels Oo waxay bixisaa toosh Tone LED flash, waad ogtahay, oo leh laba midab oo kala duwan si loo gaaro midabbo badan oo dabiici ah markaan u isticmaalno xaaladaha iftiinka yar.
Cabirka pixels ee dareeraha ayaa kordhiya cabirkiisa oo muraayadaha indhaha ayaa kusii jira aaladda f / 2.2, marka la soo koobo, tayada dareemayaasha ayaa la hagaajiyay si loo helo sawiro ka fiican. Waxaas kor ku xusan ka sokow, waxaa la soo saaray teknolojiyadda “Focus Pixels” oo u oggolaanaysa in la ogaado haddii shay uu ku jiro ama uu ku jiro wajiga.
Sidoo kale waa la soo bandhigayaa nidaamka xasilinta muuqaalka iyo tikniyoolajiyada yareynta buuqa sawiradaas oo nalku ku yar yahay. Ugu dambeyntiina, qaabka dusha sare wuxuu hadda awood u leeyahay inuu sawirro ka qaado illaa 43 megapixels.
Sida fiidiyowga, iPhone 6 ayaa awood u leh inuu duubo Fiidiyowga 1080p 60fps ama haddii aan rabno habka dhaqdhaqaaqa qunyar-socodka, hadda waxaan heleynaa qiyaas ah 240fps si aan u gaarno natiijo runtii cajiib ah.
Helitaanka iyo qiimaha iPhone 6
IPhone 6 waxaa lagu heli doonaa noocyo ka mid ah 16GB, 64GB iyo 128GB qiimaha aad ku aragto sawirka, in kastoo kuwani lala xiriiray joogitaan labo sano ah shirkadda. Waa inaan sugnaa dhowr daqiiqadood si aan u ogaanno qiimaha iPhone 6-kiisa qaybtiisa bilaashka ah. Xaaladda iPhone 6 oo lagu daray, qiimaha waxaa lagu kordhiyay 100 doolar kiis kasta.
IPhone 6 ayaa garaaci doona mawjadaha ugu horeeya ee wadamada soo socda Sebtember 19, ahaanshaha boos celin la heli karo laga bilaabo Sebtember 12.
Ugu dambeyntii IOS 8 waxaa loo heli karaa soo dejinta laga bilaabo Sebtember 17.
Wadada buuxda ee maqaalka: War gadget » Telefoon » Mobiles » Apple waxay si rasmi ah u soo bandhigeysaa iPhone 6
Sida loo sameeyo wicitaano fiidiyoow oo bilaash ah Mozilla Firefox
La shaqeynta Microsoft qaabeynta cusub ee MSN.com